Yobhi 27 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
27 Yaye uYobhi waliphakamisa kwakhona ilizwi lakhe ethetha ngemizekeliso+ waza wahlabela mgama wathi: 2 “Ephila nje uThixo,+ ngubani owususileyo umgwebo wam,+Yaye esaphila nje uSomandla, ngubani owenze krakra umphefumlo wam,+ 3 Ngoxa impefumlo yam isaphelele ngaphakathi kum,Nomoya kaThixo usesemathatheni am,+ 4 Imilebe yam ayiyi kuthetha ntswela-bulungisaNolwimi lwam aluyi kudumzela inkohliso! 5 Makube lee kum ukuba ndinivakalise ningamalungisa!+Ndide ndibhubhe andiyi kuyisusa kum ingqibelelo yam!+ 6 Ndibambelele kokusesikweni kwam, yaye andiyi kukuyeka;+Intliziyo yam ayiyi kundingcikiva yonke imihla yam.+ 7 Utshaba lwam malube ngumntu ongendawo ngandlela zonke,+Nalowo undivukelayo abe ngumenzi wobubi ngokwenene. 8 Kuba liyintoni na ithemba lomwexuki ukuba kunokwenzeka amnqumle,+Ukuba kunokwenzeka uThixo awuthabathe umphefumlo wakhe kuye?+ 9 Ngaba uThixo uya kusiva isikhalo sakheUkuba kunokwenzeka afikelwe kukubandezeleka?+ 10 Okanye ngaba uya kuyoliswa nguSomandla ngokugqibeleleyo?Ngaba uya kubiza kuThixo ngamaxesha onke? 11 Ndiya kuniyalela ngesandla sikaThixo;Oko kukuSomandla andiyi kukufihla.+ 12 Khangelani! Nonke nibone imibono;Ngoko kutheni na nizibonakalisa nizizinto ezililize kwaphela?+ 13 Esi sisabelo somntu ongendawo esivela kuThixo;+Nelifa loozwilakhe baya kulifumana kuSomandla. 14 Ukuba oonyana bakhe baba baninzi, kukwenzela ikrele;+Yaye inzala yakhe ayiyi kuba nokutya okwaneleyo. 15 Abasindileyo bakhe baya kungcwatywa ebudeni besibetho esibulalayo,Nabahlolokazi babo abayi kulila.+ 16 Ukuba unokufumba isilivere njengothuli,Aze alungise isinxibo ngokungathi ludongwe, 17 Uya kulungisa, kodwa ngolilungisa oya kwambatha,+Yaye ngulowo umsulwa oya kuba nesabelo kwisilivere. 18 Indlu yakhe uyakhe njengenundu,Nanjengomnquba+ owenziwe ngumlindi. 19 Uya kulala esisityebi, kodwa akukho nto iya kuhlanganiswa;Uwavulile amehlo akhe, kodwa akuyi kubakho nto.+ 20 Izinto ezinkwantyisayo zequbuliso ziya kumfikela njengamanzi;+Ebusuku umoya osisaqhwithi uya kumba umke naye. 21 Umoya wasempuma uya kumthabatha emke,+Yaye uya kumphephethekisa emke endaweni yakhe.+ 22 Uya kuziphosa kuye ungabi namfesane;+Uya kuzama ukubaleka emke emandleni awo.+ 23 Omnye uya kumqhwabela izandla+Ambethele umlozi+ esendaweni yakhe.